Ahiahina fihotsahana :: Mitatao eny amin’ny fokontanin’ Ankazotokana ny loza goavana • AoRaha
Ahiahina fihotsahana Mitatao eny amin’ny fokontanin’ Ankazotokana ny loza goavana
Mivarahontsana ireo mponina etsy amin’ny fokontany Ankazotokana. Namoaka fanambaràna ny Birao misahana ny loza
voajanahary na BNGRC, tamin’ny 10 janoary lasa teo, taorian’ny fitsirihana nataon’izy ireo fa ahiana hihotsaka ihany koa ny tany etsy amin’ny fokontany Ankazotokana, ao amin’ny Boriborintany faharoa. Betsaka ny loza mety hate­rak’ity fihotsahana ity, araka ny fanambaràna hatrany.
“Ahiana ny fihotsahan’ny tany. Mety hitera-doza amin’ ireo trano rehetra eo ambonin’ ny tobin-tsolika Total izany. Mety hampipoaka an’io tobin-tsolika io ny fihotsahan-tany satria mety hisy fifampi­kasohan’ny tari-by mitondra herinaratra mandritra an’ izany trangan-javatra izany, indrindra amin’ny andro alina”, araka ny tatitra avy amin’ny BNGRC. Noha­mafisin’izy ireo fa avy amin’ ny rotsak’orana, tamin’ny alarobia lasa teo sy ny
lalan’ny rano maloto eo ambonin’io tobin-tsolika io no hitarika ny fihotsahana.
“Miisa enina ny trano eo amin’ity tany ahiana hiho­tsaka ity. Maherin’ny telopolo ny olona tandindonin-doza amin’izany. Araka ny fanazavan’ny teknisiana avy ao amin’ ny BNGRC, dia ny fisian’ny lalan-drano eny ambony eny no hitarika an’io fihotsahana io, ka mila avily lalana izany”, hoy Rasoaova Stella, lehiben’ ny fokontany Ankazotokana. Fantatra fa tsy matory ao an-tranony intsony ireo olona tafiditra ao anatin’ilay tany mety hihotsaka.
Miandry ny sampana mpamonjy voina kosa ny fokontany hanapaka ireo hazo eny an-toerana.
Ankilany, nitohy ny fitsirihana nataon’ny avy ao amin’ ny sampana mpamonjy voina taorian’ireo voina niseho tamin’ ny 8 janoary lasa teo noho ny orana nikija teto an-drenivohitra. Nojerena avokoa ny trano, hazo, tamboho atahorana hianjera ka mety hampidi-doza ny manodidina. Miantso ny rehetra ny sampana mpamonjy voina mba hampan­dre azy ireo raha misy fanahiana loza eny amin’ny fiarahamonina. Tsy tokony hialofana na hijanona na ihany koa eny ambany hazo sy tamboho.
Tatitry ny fanjakana tamin’ny Depiote Nohamafisin’ny Praiminisitra ny fiain- gan’ny fampandrosoana isam-paritra
Trafika harena an-kibon’ny tany Talena orinasam-panjakana nitondra vato « Cristal » 200kg
Fifaninanana tetikasa Hanome loka dimy hetsy sy iray tapitrisa ariary ny CGM-GZ
Rovan’Antananarivo :: Ho vita amin’ny volana mey ny asa fanarenana ny Lapan’i Manjakamiadana
Fiafaran’ny fe-potoana iasana :: Mbola hikarakara fifidianana alohan’ ny oktobra 2021 ny CENI ankehitriny